Iyakhula iPhantane esinabela ezweni lonke - Impempe
Iyakhula iPhantane esinabela ezweni lonke
May 14, 2021 May 14, 2021 Impempe.com
Isizosabalala iNingizimu Afrika yonkana iPhantane Athletics Club njengoba isezinhlelweni zokubhalisa nangaphansi kweCentral Gauteng Athletics. Le nhlangano beyigxile kakhulu KwaZulu-Natal kodwa manje seyifuna ukuphumela nakwezinye izifundazwe kwazise abaphathi bayo bafuna igcine ingenye yezinkulukazi kuleli.
Exoxa neMpempe ngasekuqaleni kweviki uMduduzi Khumalo oyimenenja uthe bazobhalisa kwiCentral Gauteng Athletics khona kuzoba nabagijimi abazoziqeqeshela kulesi sifundazwe.
Unethemba ukuthi yonke into izohamba kahle. Uphinde waveza ukuhlabana ngofishi omkhulu njengoba u-Anna Ashworth, oke wanqoba iComdrades Marathon ngo-2018 noDavid ongumkhwenyana wakhe.
UmfokaKhumalo, osekhombise amagalelo amahle kwiPhantane, uthi ukujoyina kuka-Ashworth kuzolandelwa eduze yizintokazi eziyishumi akade enazo ngaphansi kwe-Ashworth Athletics Club.
“Kuzothuthukisa iqembu lokhu, liphinde likhule kakhulu njengoba belishoda ngezintokazi. Lokho kuzophinde kuhehe abasubathi abaningi besifazane eNingizimu Afrika nasezwenikazi lase-Afrika,” kubeka uKhumalo.
Le ntokazi izoqala ukugijima isingaphansi kwiSanlam Marathon eKapa seyifake imibala yePhantane. UKhumalo uphinde waveza ubudlelwano anabo neHollyoodbets Athletics Club la kukhona abasubathi ababolekisile omunye wabo okunguMahlomula Sekhonyana onendondo yegolide oyithole engena isine kwiComdrades Marathon.
Khonamanjalo, uMbuleli Mathanga uzolibangisa e-Algeria kwi-African Championships ngoMeyi 23. Udaba olugcwele ngalokhu sizolushicilela maduze.
Previous Previous post: LISENETHINI! Kujika izinto njengoba sekusongwa
Next Next post: Injabulo kuZinnbauer kubuya onozinti kwiBucs